वेदमा महिलाहरुको स्थान - LiveMandu
वेदमा महिलाहरुको स्थान
अर्थात जसरी मैले यि आशिषका शब्दहरु कुनै भेदभाव बिना भनें त्यसैगरि श्रोता या अध्यनकर्ताले पनि यी ज्ञानका बचनलाई हरेक पुरुष या महिलासमक्ष बाँढ्नु । ति व्यक्तिहरु ब्राह्मण, क्षेत्रिय, बैष्य, शुद्र, बिदेशी या अन्य ग्रहवाट आएका प्राणी किन नहुन् ।
एउटा विवाद निकै चुलिएको पाइन्छ, सनातन संस्कारमा महिलाहरुको उपस्थितीका विषयमा । अन्य धर्मका अवसरवादि ठेकदारहरुले हिन्दु धर्ममा प्रहार गर्न महिला विभेदका आरोपहरु निकै लगाएका छन् । यसै तर्क अनि अल्पज्ञानलाई आधार बनाएर धर्म परिवर्तन, आलोचना अनि निकृष्ट बचनहरु हिन्दु सनातन परम्परा माथि लगाइरहेको अवस्था छ ।
आउनुहोस आज थोरै शास्त्रार्थ गरौं कि के साच्चीकै सनातन सस्कारमा महिलाहरुलाई वेद पाठमा बर्जित गरिएकै हो त रु शास्त्रले के भनेको छ त ? भन्ने बिषयमा।
वेद पाठ महिलाहरुले गर्न नहुने अनि त्यसो गरेमा बिभिन्न अवरोधहरु आउने लगायत बिभिन्न धारणा र तथ्यहरु सुनिने गरिएको छ । हामीहरु यसको गहिराई सम्म पुग्ने कसरत नै नगरि केवल सतही कुरालाई आधार मान्दै आफ्नो धारणा बनाँउदछौं । स्मरण रहोस् कि वेदमा रहेको ताण्डेय ब्रहमणा मन्त्र त महिलाहरुले मात्रै पढ्नु पर्दछ । केवल महिलाहरुको लागि मात्र प्रार्थमिक्तामा राखेर बनाइएको उक्त मन्त्र ले आँफै वेदमा महिलाहरुको स्थान लाई निकै माथि राखेको भान हुन्छ । वेदमा त्यस्तो कुनै प्रकारको लैगिंक भेदभाव छैन भनी ‘द हिन्दु टाइम्स’ले समेत पटक-पटक प्रकाशीत गरेको छ । वेद पाठ गर्दा महिलाहरुको सन्तान उत्पादन क्षमतामा कमी आउने अनि भार पर्ने लगायतका फगत धारणाहरु ल्याइएको पाइन्छ जबकी यी कुराहरुमा कुनै सत्यता छैन् । शुक्ल यर्जुवेदको २६ को २ मा स्पष्टसंग लेखिएको छ कि पुरुष महिला दुबैका लागि बेद समान छ भनेर ।
उता अर्थव वेदमा त झन नैरोग्यताका लागि बिभिन्न जडीबुटी अनि पद्धतीका प्रयोग पनि सिकाइन्छ । परिवार अनि सुस्वास्थमा महिलाहरुको भूमिका अर्थव वेदले उतिबेलै आत्मसाथ गरेको पाइन्छ । बिभिन्न अध्ययनहरुले पनि बैद्धिक कालमै पनि महिलाहरुले समानरुपमा बेद अध्ययन गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसपछि ईशपूर्व २००० बर्षमा आएको मनुस्मृती सुत्रका कारणले वेद अध्ययनमा केही सिमा कोरिएको या कोरिन गएको अनि गलत धारणाको बिकास हुन गएको भनि बिभिन्न अध्ययनकर्ताहरुले लेखेका छन् ।
मनुस्मृती र पुराणकै बिषयमा स्वामी बिवेकानन्दको धारणा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न चाह्यौं ।
मनुस्मृती र पुराणहरु थोरै ज्ञान भएका पुरुषहरुको ज्ञान सिमीतताको उपज हो । यिनमा धेरै अप-व्याख्या, भेदभाव र त्रुटिहरु छन् । उपनीषध र गीताहरु चाँही सत्य सनातन ग्रन्थहरु हुन्।
संभवत अब हामीले भागवत गीता र वेदहरुमा धेरै अध्यन गर्ने अनि कर्मकाण्डी पुस्तक र पुराणहरुमा भनें ध्यान हटाउने बेला आएको छ । मनुस्मृती भनेकै स्मृती अर्थात् संझना गरेको आधारमा लेखिएका पुस्तकहरु हुन् । धार्मिक पुस्तकहरु स्मृती या श्रुती लगायतका माध्यमले लेखिन्छ । स्मृती भनेको संझनाको आधारमा अनि श्रुती भन्नाले सुनेको आधारमा । हजारौं वर्ष अघिको स्मृतीका आधारमा लेखिएका या श्रुतीका आधारमा लेखिएका ग्रन्थहरु फरक हुन्छन्, तिनमा तथ्य भन्दा लेखकका धारणाहरु र पूर्वाग्रह धेरै हुनसक्ने संभावना हुन्छ ।
हरिद्धारको आचार्यकुलमका उपप्रधान आचार्य कृष्ण भट्ट स्वयमले बिवाह पश्चात आफ्नी धर्मपत्नीलाई वेद सिकाएको बताएका छन् । द हिन्दु टाइम्सलाई बताँउदै आफ्नी श्रीमतीले बिवाहपछि नै सस्कृत अनि बेद ज्ञानमा मास्टर्स अनि एमफील गरेकी स्पष्ट पारेका छन् । उन्का अनुसार हरिद्धारको आचार्यकुलममा जुनै जात, धर्म या कुलका बालबालिका या बिधार्थीलाई पनि निसन्देह अनि समानरुपले वेद अनि सस्कृत सिकाइने गरेको छ । उनका अनुसार वेद ज्ञानमा त झन बैज्ञानीक रुपमा ग्रह, दीशा, गुरुत्वाकर्षण अनि ब्रह्माण्डका बारेमा सिकाइन्छ ।
यर्जुवेदको १३ को २६ ले पनि त्यस्तै कुरा उजागर गरेको छ । महिलालाई सम्बोधन गर्दै महिलाहरु लाई कुनै पनि चुनौती या अफ्ठेराहरुले पराजय गर्न नसक्ने र महिलाहरुसंगको शक्तिले जस्तासुकै भयावह शक्तिलाई पनि पराजित गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । हजारौं मानव बरावरको सार्मथ्य एकै महिलाहरुमा हुने कारणले आफूसंग भएको शक्तिलाई जागृत र पहिचान गर्दे अगाडी बढ्न आग्रह गर्दछ । बिश्वले महिलावाट अदम्य साहसको अपेक्षा गरेको छ भन्ने अर्थ यस श्लोकले लगाँउदछ ।
फेरि अर्थव वेदको ११ को ५ को ८ को ब्रह्मचर्य शुक्तमा महिलाहरुले पनि पुरुष सरह समान रुपमा बिध्या आर्जन गर्नका लागि आव्हान र उत्प्रेरणा दिएको पाइन्छ । यस शुक्तले या भनौं श्लोकले महिला पुरुष समानताका लागि गज्जबले पैरवी गरेको छ है । हाम्रो शास्त्र माथि औंला ठड्याउने हातहरुका लागि यस्ता तथ्यहरु चोपीलो उत्तरहरु हुन् ।
यत्तिका आदर अनि सम्मानका साथ वेदमा महिलाहरुलाई देबीको स्थान दिइएको छ । एकएक गर्दै अध्ययन गर्ने हो भने समानता अनि सदभावको लहर अनि श्रोतका रुपमा वेदलाई लिन सकिन्छ ।
महिलाहरुले वेद पाठ गर्न नपाउने कपोल कल्पित कुराहरु केवल भ्रम फैलाइएका मात्र हुन् ।
यो लेख आफू पनि पढौं र सक्दो शेयर गरेर धर्मरक्षार्थ एक हौं ।
हेर्दै गरौं लाइभमाण्डु
अंग्रेजीमा पढ्नुहोस :https://livemandu.com/2529/
Important Mental Health Tips You Should Try Right Now!!